Munaasabadda lagu soo bandhigayey adeeggan, waxaa ka qayb-galay Xildhibaan, maaamulka gobalka Nugaal, kan degmada , , Isimio, Ganacsato haween iyo marti sharaf ka socotay qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Masuuliyiintii ka hadashay iyo dadkii kale ayaa si iskumida usoo dhaweeyey barnaamijkan ay soo kordhisay TAWAL, waxayna tilmaameen inuu yahya mid fududaynaya xiriirka Soomaaliya ay leedahay bulshooyinka Caalamka.
Maareeyaha Suuq gaynta Shirkadda Tawakal Eng. Cali Siciid Maxamed oo Faah faahin ka bixiyey adeega ayaa sheegay in Shirkadu markay aragtay baahida loo qabo qorshe noocaan oo kale ah ay garowsadeen inay soo kordhiyaan TPLUS oo fududaynaya inay lacagaha dadweynuhu isu diraan.
Isagoo tilmaamay inuu yahay APP-kii ugu horeeyey ee shirkad Somaliyeed ka hirgaliso waddanka, wuxuuna xusay inuu ku xirmayo dhammaan adeegyada lacagaha la isugu diro iyo Xawaaladaha .
Maareeyaha Shirkadda Tawakal ee Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cabdi ayaa sheegay in Caawa ay u tahay Farxad, maadaama ay soo kordhiyeen adeeg ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed, isagoo sii raacshay in Shirkaddu ku mash quulsan tahay siday hadba usoo kordhin lahayd Adeegyo la jaan qaadaya Technologiya-da Casriga ah oo shacabka waxtar u leh.
Maareeyaha Guud ee Shirkadda Tawakal Maxamed Cali Jaamac ayaa sheegay in Adeega TPLUS uu yahay mid si fudud kuugu sahlaya lacagta aad dirayso ama lagu soo dirayo, waxayna lacagtaadu kuu ahaanaysa mid amaano ah.
Maxamed Cali ayaa goobta kaga dhawaaqay lacago shirkaddu ugu deeqday Abaaraha iyo Dhismaha Garoonka Garowe.
Waxaa iyaguna Munaasabadda ka hadlay duqa degmada Garowe Xasan Goodir, gudoomiye ku xigeenka gobolka Nugal Qaasim Maxamed Cabdi, Xildhinbaan Dhoobe daareed iyo Shiikh Cabdiqani Qorane waxayna dhamaantood si isku mid ah usoo dhaweeyeen Adeegga Casriga ah ee Shirkadda Tawakal soo kordhisay
Ugu dambayntii shirkadda ayaa 10 qof ee ugu isticmaalka badan barnaamijkan TPLUS u ballanqaaday inay hadyo siin doonto.
Warbaahintan Radio Garoowe oo ah Idaacad u dhaq-dhaqaaqda inta badan arrimaha Bulshada ayaa Isniintii Bilowday Olole....
​Madaxweynaha Puntland oo Garowe ku wajahan
Puntland 10.12.2016. 07:22
Puntland 02.08.2016. 04:13